Sebenzisa i-API yeTechnorati kunye ne-PHP | Martech Zone
Sebenzisa iTechnorati's API kunye ne-PHP
NgoMgqibelo, nge-24 kaFebruwari ngo-2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
EZINTSHA: NgoMatshi 3, 2007 - Ikhutshwe i-Technorati Rank WordPress Plugin.
UKUHLAZIYA: Kulungile ukuba i-Technorati inomda wemihla ngemihla. Ndifumene indlela enzima, bandivala. Ukuba uyifakile iwijethi, uya kubona ukuba ithi Impazamo ngekhonkco elibuyela kwiProjekthi yePhepha ukuze ukhuphele kwaye ubambe ikhowudi ngokwakho. Ndihlaziye ikhowudi ukuze wakuba nje ufikile kulwabiwo lwemihla ngemihla API iminxeba, iya kutshintsha nje ibe likhonkco "Yongeza kwiiFavorites".
Ukuba ngumthengisi wedatha ngokurhweba, ndineempazamo ezimbini (zilungile… zininzi ngaphezulu kwesibini, kodwa ezi zinento yokwenza nale posi). Ndisebenza kakuhle ngeenjongo zamanani kwaye ndisebenza ngokulungelelanisa kunye nokulungelelanisa iiprojekthi, abantu, isoftware, njlnjl. intsomi).
Isiphene samanani sindigcina ndijonga kwiTechnorati, uGoogle Analytics, kunye noGoogle Adsense yonke imihla, yonke imihla. I-Techorati yenye yezo zilufumana ngokwenene umdla wam kuba indinika ukuba ngubani onxibelelana nam. Ndiyakuthanda ukutyelela ezo ndawo kwaye ndibone ukuba bathini okanye yintoni abayifumene iluncedo. Ukuze uqaphele ukuba inqanaba lam litshintshile okanye alitshintshanga, nangona kunjalo, kufuneka ndenze uphando kwibhlog yam.
Ndidinga into ekhawulezileyo ke ndacwangcisa 'iwijethi' encinci kwiTechnorati API ukufumana inqanaba lam ngokukhawuleza nangokulula. Ngokwenyani yile nto ibonisa inqanaba eliphezulu kule post. Ukuba ungathanda ukubona indlela, hit my iphepha leprojekthi phezulu.
Ukugoba ngeeLaptops… nezinye iindlela ezizezinye
Ngaba oku kuthetha ukuba ndiza kuba ngowokuqala ukuthi enkosi 🙂 kwaye ndikuxelele ukuba ndiyiboleke ngokuqinisekileyo le 🙂
Ukuboleka kude, uSteven! Yile nto ibhlog emalunga nayo.
Ndenze uhlengahlengiso olusebenzisa ilogo encinci yeTechnorati. Ibhalwe kakuhle ngoku. Ndihlaziye iphepha lekhowudi ngokunjalo.
ukuchukumisa okuhle 🙂
Ndiyibonisa kwindawo ekuyo iZikhundla zeSayithi iwijethi- yamatyala ngenxa yekhosi 🙂
Wow, yityala elikhulu! Enkosi kakhulu. Ungaziva unyanzelekile ukuba ugcine apho. Ndinegqabantshintshi kwi-HTML ekhomba kwiphepha leprojekthi.
Ndilungelelanise ubungakanani bokubhaliweyo be-LOL ukuze ijongeke ngcono.
Ndihlaziye iwijethi ngesixhobo esincomekayo esibonelela ngeenkcukacha ezongezelelweyo malunga nenqanaba lakho! Igama leBhlog yakho (ngokweTekhorati) kunye nokunxibelelana kunye neebhloko.
Ewe, kwakukhawuleza! Okwangoku ndifumana impazamo kwiTechnorati:
Usebenzise isabelo sakho semihla ngemihla semibuzo ye-Technorati API.
Ngale nto engqondweni, ndiye ndaguqula iiposti zam apha ukuze abantu babambe ikhowudi ngokwabo kunokuba babethe indawo yam. Uxolo malunga nabantu! Bendingazi nokuba kukho 'ulwabiwo lwemihla ngemihla'.
Kulungile ukuba umunce uDoug 🙂… oh kwakumnandi ngelixa yayiqhubeka. Nangona i-soes isiya kubonisa ukuthandwa okuqinisekileyo- mhlawumbi iTechnorati iyakuqaphela kwaye iphumeze into efanayo
Ndiyathemba ukuba kunjalo. Ndifunde indawo yabo kwaye andifumani ukuba yintoni 'isabelo semihla ngemihla', nangona kunjalo. Kuyakhathaza okuncinci.
Ndiyilungisile ikhowudi ukuba idlulise umyalezo wemposiso njengoko kuphawuliwe nge-HTML ukuze ingabonisi u "0" owayekade esenza. Ngoku iya kubonisa kuphela iwijethi ukuba kukho impendulo elungileyo.
Ndicinga ukuba ukubheja okungcono kunokuba kukusingatha iphepha lomthombo ngokwakho ungayenza loo nto. Ndiza kukugcina xa ufumanisa ukuba yintoni 'isabelo semihla ngemihla'. Enkosi, Steven!
Kulungile… ezinye izinto eziphuculweyo. Ukuba uzama ukukhangela i-URL kunye newijethi ngaphandle kweyam, iya kukuxelela ukuba kukho impazamo kwaye ikuzise kwiphepha leprojekthi. Oku kwenzelwa ukuba ukhuphele ikhowudi kwaye uyisingathe ngokwakho. Nabani na ongayibamba le khowudi kwaye ngaloo ndlela awuyi kungena kwisabelo se-API semihla ngemihla.
Ndiyiguqule kwakhona ukuba ufikelela kulwabiwo lwemihla ngemihla, itshintshela nje kwikhonkco elithi "Yongeza kwiiFavorites"!
Ndiyazibuza ukuba abafana bakaDapper bayenza njani? Mhlawumbi bajonge kube kanye ngemini kwaye bagcine iziphumo.
Isikrini esiliDrafti sokuChola nayiphi na iSiza
Mar 3, 2007 ngo 6:43 PM
Kulungile bakhaya! Ndiyibhale ngokutsha ngokupheleleyo kwi-WordPress iplagi kwaye ine-caching. Woohooo!
Iplagi yeWordPress yeWebhusayithi
Mar 10, 2007 ngo 2:56 PM
Ndifumene i-addon yakho encinci yeTechnorati, nangona ndifumene ukuba iseva yam ayinayo i-cURL edityanisiweyo xa kwakufakwa i-PHP5.
Ke ndiza kubona ukuba ndingayenza le isebenze: http://samanathon.com/2007/03/10/wordpress-plugin-display-your-technorati-rank-with-php-4/ oncede ngayo kwabo bangasebenzisi i-PHP5 🙂
Mar 10, 2007 ngo 5:21 PM
Wowu, Tyler! Ndiyazi ukuba i-cURL iyimfuneko kodwa khange ndiqonde ukuba abanye abantu abazukuyifumana. Ndacinga ukuba elo lilayibrari elayishwe ngokungagqibekanga ngo fakelo lwe-PHP. Ndiyathekelela kuphela- kodwa ndiyabheja ukuba iSamanthon isebenzisa i-cURL nayo.
Sep 10, 2008 kwi-3: 44 AM
Ndiyabulela kakhulu! Oku kundincede ndalayisha imithwalo.
Ngoku ndifuna ukuyiguqula kwaye kufanelekile
Jul 17, 2009 ngo-4: 20 AM
Nawuphi na umntu onalo naluphi na uluvo ngowona mda kanye kanye? Ndifumene nje indlela enzima yokuvavanya usetyenziso 🙁
Jul 17, 2009 ngo-4: 24 AM
Hayi ndifumanise ukuba yi-1000… oops, ingaba ngenene ndenze imibuzo eyi-1000 namhlanje?
guitarnoize-qiniseka ukubeka uhlobo oluthile lweendlela ezilula zokugcina i-caching